Kaalintee Soomaliya ka gashay shanta wadan ee Africa ee ku guuleystay inay dadkooda ka badbaadiyaan HIV Aids? - Caasimada Online
Home Warar Kaalintee Soomaliya ka gashay shanta wadan ee Africa ee ku guuleystay inay...
Kaalintee Soomaliya ka gashay shanta wadan ee Africa ee ku guuleystay inay dadkooda ka badbaadiyaan HIV Aids?
HIV AIDS waa cudurka ugu halista badan adduunka wuxuuna sannad kasta sabab u noqdaa dhimashada malaayiin shaqsi. Dalalka Saxaraha ka hooseeya ee Africa ayaana daaha laga qaaday in wadar ahaan boqolkiiba 69 ay dadkoodu qabaan cudurkaan.
Sannadkii 2011kii ayey aheyd markii la ogaaday in boqolkiiba 70 dadkii uu ku dhacay cudurkaan HIV AIDS ee ku noolaa dalka Saxaraha ka hooseeya ee Africa ay u dhinteen. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira shan dal oo Africa ah oo si weyn loogu ammaanay qaabka ay dadkooda uga badbaadiyeen cudurkaan dillaaga ah.
Dalkeena Soomaaliya ayaana kaalinta labaad kasoo galay qiimeyntaan shanta dal ee Africa eek u guuleystay inay shacabkooda ka badbaadiyaan cudurkaan (Top 5 African Countries That Have Successfully Controlled HIV AIDS).
Qiimeyntaan la sameeyey ayaana lagu xaqiijiyey in boqolkiiba 0.9 ay qabaan cudurkaan HIV Aids, iyadoo qiyaas ahaan dadka Soomaaliya ku nool lagu tilmaamo 10.5 milyan oo shaqsi. Waxayna Soomaaliya soo gashay kaalinta 2aad maadaama ay shacabkoodu ku guuleysteen inay ka fogaadaan cudurkaan iyadoo ay deris la yihiin Kenya, Uganda, Ethiopia iyo Tanzania kuwaasoo shacabkoodu ay dhibaato badan ku qabaan cudurkaan isla markaan ay malaayiin shaqsi uga dhintaan cudurkaan sannad kasta.
Algeria oo guud ahaan ay ku nool yihiin in ka badan 39 milyan oo shaqsi ayaana kaalinta koowaad kasoo gashay qiimeyntaan, halka Egypt ay kaalinta seddaxaad kasoo tiigsatay qiimeyntaan.
Waxayna ka dambeysaa dalkeena Soomaaliya, kaalinta afaraad ee qiimeyntaan ayaana waxaa soo galay Libya, halka Morocco ay soo gashay kaalinta ugu dambeysa qiimeyntaan shanta dal ee Africa kuwaasoo ku guuleystay inay shacabkooda ka badbaadiyaan cudurka dillaaga ah ee HIV AIDS
Shabakadda Howafrica.com ayaa qiimeyntaan soo bandhigtay. Lifaaqaan ayaadna ka akhrisan kartaa warbixintaan oo rasmi ah.